AJA သည် OpenGear နှင့်လိုက်ဖက်သောကတ်အသစ်များကို IBC 2019 တွင်မိတ်ဆက်ပေးခဲ့သည် NAB သတင်းများ | 2021 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » Aja IBC 2019 မှာနယူးopenGear®လိုက်ဖက်တဲ့ Card များကိုမိတ်ဆက်
Aja IBC 2019 မှာနယူးopenGear®လိုက်ဖက်တဲ့ Card များကိုမိတ်ဆက်
ဩဃ-FS-Mini ကိုပု openGear ဗိသုကာဗီဒီယိုဘောင်ထပ်တူဖွ;
ဩဃ-ရွယ်-DVI ဩဃတို့သည်-ROI-HDMI Aja openGear အတိုင်းအတာနှင့်စကင်ကိုပြောင်းလဲလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုချဲ့ထွင်
အမ်စတာဒမ်, နယ်သာလန်, IBC ညီလာခံ, 7.C25 (စက်တင်ဘာလ 13, 2019) ရပ် - openGear ၎င်း၏ကြီးထွားလာမိသားစုအပေါ်အဆောက်အအုံ® ထုတ်ကုန်, Aja ဗီဒီယိုစနစ်များ အဆိုပါအပါအဝင် IBC 2019 မှာအသစ်သုံးမျိုး openGear ကတ်များထုတ်ဖော်ပြသ ဩဃ-FS-Mini ကို, ဩဃ-ရွယ်-DVI နှင့် ဩဃ-ရွယ်-HDMI။ ဩဃ-ရွယ်-DVI ဩဃတို့သည်-ROI- စဉ်ဩဃ-FS-Mini ကို, အ openGear ဗိသုကာနှင့်အတူ Aja ရဲ့အသစ်ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည် FS-Mini ကိုဘောင် synchronous Mini ကို-Converter ၏လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကို fusesHDMI ထောက်ခံမှု DVI သို့မဟုတ် HDMI SDI ဒေသ-of အကျိုးစီးပွားစကေးစကင်ကိုပြောင်းလဲခြင်းနှင့် openGear format နဲ့ image ကိုလည်ပတ်ရန်။ တစ်ခုချင်းစီကိုကဒ် openGear 2RU အတွက်အသုံးပြုရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ် Aja ရဲ့ဩဃ-X-FR 2RU ဘောင်အပါအဝင်ဘောင်ခတ်နှင့်အဝေးမှ, configured စောင့်ကြည့်နှငျ့ Ross Dashboard software ကိုသုံးပြီး PC မှာသို့မဟုတ်ဒေသဆိုင်ရာကွန်ရက်ကကိုကျော်ထိန်းချုပ်နိုင်ပါတယ်။
"ထုတ်လုပ်မှုယုံကြည်စိတ်ချရသော, ကျစ်လစ်သိပ်သည်းပြောင်းလဲခြင်းဖြေရှင်းချက်များအတွက်ဝယ်လိုအားတိုးမြှင့်, ထုတ်လွှင့်, OTT နှင့် proAV ဖြတ်ပြီးဖြစ်ထွန်းအောင်မြင်နေသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အသစ်သောဩဃ-FS-Mini ကို, ဩဃ-ရွယ်-DVI ဩဃတို့သည်-ROI-HDMI openGear ကတ်များ openGear ဗိသုကာအတွက်ဝေးလံခေါင်သီဖွဲ့စည်းမှုပုံစံနှင့်ထိန်းချုပ်မှုနှင့်အတူ, အစွမ်းထက် frame ကိုထပ်တူနှင့်ဒေသ-of အကျိုးစီးပွားပုံရိပ်ကိုလာခြင်းနှင့်အတူဤလိုအပ်ချက်ဖြေရှင်းရန်, "နစ်ခ် Rashby, သမ္မတ, ရှင်းပြခဲ့ Aja ဗီဒီယိုစနစ်များ.
ဩဃ-FS-Mini ကို, frame ကိုထပ်တူနဲ့ SD တက် / ဆင်း / Cross-ကူးပြောင်းနိုင်အောင်စီစဉ်ပေးထားတယ်ကြောင်း Aja တစ်ဦးထံမှ openGear သဟဇာတကဒ်ဖြစ်ပါသည် HD မြင့်မားတဲ့သိပ်သည်းဆ openGear များထားရှိဘို့နှင့် 3G ဗီဒီယိုကအချက်ပြမှုများ။ အဆိုပါကဒ်ကိုတစ်ဦး 3G-SDI input ကိုတပ်ဆင်ထားခြင်းနှင့် 3G-SDI Output ဖြစ်ပါတယ်နှင့် HDMI တစ်ပြိုင်နက်တည်း, မျှမျှတတ Analog စအသံဖိုင်ရလဒ်နှစ်ခု 3-pin ကို terminal ကိုပိတ်ပင်တားဆီးမှု connectors အတူ။
ကျယ်ပြန့်အသံလုပ်ဆောင်ချက်ကို, မယုံနိုင်စရာပုံရိပ်ကိုအတိုင်းအတာနှင့်ရှုထောင့်နှင့်ဘောင်နှုန်းကိုပြောင်းလဲခြင်း, ဩဃ-ရွယ်-DVI ဩဃတို့သည်-ROI- featuringHDMI , ကွန်ပျူတာ DVI ၏အရည်အသွေးမြင့်ပြောင်းလဲခြင်းဖွသို့မဟုတ် HDMI SDI ကျော်ကဗီဒီယို baseband မှရလဒျ။ အကျိုးစီးပွားထောက်ခံမှုဒေသကြီးပညာရှင်များလွယ်ကူစွာစကင်ကိုပြောင်းလဲ, အတိုင်းအတာနှင့် SDI မှပြောင်းလဲခြင်းများအတွက်ကွန်ပျူတာနှင့်ဗီဒီယိုအရင်းအမြစ်အချက်ပြမှုများကို extract လုပ်ခွင့်ပြုပါတယ်။
ဩဃ-FS-Mini ကို $ 695 အမေရိကန် MSRP များအတွက် Aja ရဲ့ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်ပြန်လည်ရောင်းချသူများကွန်ရက်မှတဆင့်ယခုရရှိနိုင်ပါပြီ။ ဩဃ-ရွယ်-DVI ဩဃတို့သည်-ROI-HDMI Aja ရဲ့ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်ပြန်လည်ရောင်းချသူများကွန်ရက်မှတဆင့် $ 995 အမေရိကန် MSRP အဘို့ဤဆောင်းဦးချင်းစီမရရှိနိုင်ပါလိမ့်မည်။ ပိုမိုသိရှိလိုပါက, သွားရောက်လည်ပတ်: www.aja.com/family/opengear
၁၉၉၃ ခုနှစ်မှစ၍ AJA Video သည် video interface နည်းပညာများ၊ converters များ၊ ဒီဂျစ်တယ်ဗွီဒီယိုမှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကင်မရာများကို ဦး ဆောင်ထုတ်လုပ်သူဖြစ်ပြီးအရည်အသွေးမြင့်မားသော၊ စျေးသက်သာသည့်ထုတ်ကုန်များကိုပရော်ဖက်ရှင်နယ်ထုတ်လွှင့်ခြင်း၊ AJA ထုတ်ကုန်များသည်ဒီဇိုင်းနှင့်ထုတ်လုပ်မှုများကိုကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်၊ Grass Valley ရှိကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံများနှင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိပြန်လည်ရောင်းချသူများနှင့်စနစ်များပေါင်းစပ်ထားသည့်ကျယ်ပြန့်သောရောင်းချမှုလမ်းကြောင်းမှရောင်းချသည်။ ထပ်မံသိရှိလိုပါကကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုကြည့်ပါ www.aja.com.
AJA သည် BRIDGE LIVE v1.11 ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့သည် - မတ်လ 30, 2021
Creative Tools များမှတစ်ဆင့် Autodesk လုပ်ငန်းအသွားအလာကိုအရှိန်မြှင့်တင်ပေးသည် - မတ်လ 26, 2021
MCI ၏ XMedia.Lab သည် AJA IP Solutions ဖြင့် Broadcast IP Workflows များ၏အနာဂတ်ကိုပုံဖော်သည် - မတ်လ 9, 2021
ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ဂရေဟမ်ချပ်မန်း Prmoted toEditor OTT post ကိုထုတ်လုပ်မှု လှံနှင့်မြှား စာတန်းထိုး, ဒစ်ဂျစ်တယ် Nirvana, မီဒီယာစောင့်ကြည့်ရေး, IBC ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ် 2019-09-13
ယခင်: Aja IBC 2019 မှာ FS-Mini ကို Frame က synchronous လွှတ်တင်
နောက်တစ်ခု: Aja Desktop ကိုဆော့ဝဲ v15.5 ကြေညာ